Dukaammada ugu fiican ee laga iibsado dharka ragga | Ragga Stylish
Iibsashada dharka jaban ee internetka ayaa caado ka dhigtay. Taleefannada gacanta iyo kombuyuutarradu maanta way iska ilaaliyaan wareejinta waxayna sugaan inay iibsadaan waxa loo baahan yahay. Tirakoobyadu waxay muujinayaan in 7kii Isbaanish ah 10 ka mid ahi ay dharka ku iibsadaan internetka.
Suuqa wuxuu noqday mid caalami ah maantana waxaa suurtagal ah in wax iibsasho laga helo ku dhowaad meel kasta oo adduunka ah. Sidaa darteed, waxaa jira dukaamo badan oo internetka ah oo bixiya dhammaan noocyada dharka qiimo wanaagsan.. Xitaa waxaad ka heli kartaa dhar jaban khadka tooska ah ee noocyada caanka ah.
Laga soo bilaabo raaxada kursiga kuraasta, inta lagu jiro qadada ama inta lagu socdo baska, qof kastaa wuu dooran karaa waxna iibsan karaa. Hal guji si aad u iibsato, guji kale oo aad ku bixiso waana intaas.
Guud ahaan, iibsiga, lacag-bixinta, soo-celinta ama hannaanka is-dhaafsiga ayaa ah mid fudud oo aad u dareera; tani waa faa iido kale oo wanaagsan in la isticmaalo iibsiga noocan ah.
1 Dukaammada waaweyn ee shabaqa
2 Xagee laga iibsadaa dharka jaban ee internetka
2.3 Arbacada ah
2.4 Maxakamada Ingriiska
2.5 Jiid & Bear
Dukaammada waaweyn ee shabaqa
Inta badan dukaamada dhaqameedku hadda waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay wax kaga iibsadaan internetka. Si tartiib tartiib ah ayaa loogu soo daray adduunkan dijitaalka ah, maxaa yeelay haddii aysan sidaas yeelin, waxay halis u geli lahaayeen in la waayo.
Shirkado ayaa sidoo kale soo baxay kuwaas oo si gaar ah ugu heellan iibka dharka jaban ee internetka. Kuwani waa dukaamo aan lahayn meel muuqaal ahaaneed oo aan shaqsi ahaan u fulin iibinta. Waxaad ka iibsan kartaa oo keliya adoo adeegsanaya internetka, tanina ma dhimeyso kalsoonidooda ama kalsoonidooda. Guud ahaan, jawaab fiican ayey ku hayaan macaamiisha, iyagoon qish iyo khiyaanooyin toona lahayn.
Kooxdan waxaa ka jira ganacsiyo, in kasta oo ay iyagu ugu yeeraan "dukaamada internetka", runti waa dhexdhexaadiyeyaal iska caadi ah. Waxay raadiyaan waxa macaamilku rabo, waxay ka iibsadaan dukaanka ku yaal ka dibna u diraan iyaga. Sida aan aragno, adduun cusub oo ganacsi oo suurtagal ah.
Xagee laga iibsadaa dharka jaban ee internetka
Amazon Waxay caan ku tahay adduunka oo waxay noqotay halbeegga adduunka ee iibka internetka. Waxay caan ku tahay iibinta wax kasta, xitaa dharka jaban ee internetka.
Dhawaan dukaankan hormuudka ka ah suuqa internetka wuxuu bilaabay codsigiisa cusub, Spark, oo ah shabakad bulsheed oo u shaqeysa si la mid ah Instagram iyo Pinterest. Dhexdeeda waad ku wadaagi kartaa sawirro, fiidiyowyo iyo macluumaad ku saabsan dharka aad jeceshahay ama alaabooyinka kale. Waa hab fiican oo fikrado looga helo adeegsadayaasha kale; Sidoo kale waa suurtogal in laga helo dukaanka websaydhkiisa.
Waa ikhtiyaar si ballaaran ay u isticmaalaan macaamiisha doonaya inay ku iibsadaan dhar jaban khadka tooska ah. Waxay ku hawlan tahay iibinta wax soo saarka suuqa Shiinaha. Uma baahna wax iibsasho ugu yar; taasi waa, waxaad iibsan kartaa hal dhar ama boqollaal ka mid ah.
Aliexpress la soco habka daadiyaa maraakiibta, Waxay leedahay buugaag dukaamo tiro badan leh. Markuu macaamilku doorto badeecada, Aliexpress waxay daryeeshaa geedi socodka oo dhan si badeecadu u gaarto meeshii loogu talagalay. Sidan oo kale, barnaamijkeeda waxaad ka heli doontaa dhar jaban oo internetka ah oo ay leeyihiin dhowr dukaanno iyo noocyo asal ah.
Ma mid kale dukaanka internetka la aqoonsan yahay. Waxay ku shaqeysaa qaab la mid ah Aliexpress. Ma lahan warshado ama bakhaarro u gaar ah; ujeedadeedu waa dhexdhexaadinta wax iibsiga.
Barxaddeeda waxaad ka heli doontaa iibiyaha dalabyadooda iyo iibsadaha baahiyahooda wata. Sidan oo kale, waxa macmiilku u baahan yahay ayaa la helaa oo iibiyahu u diraa meeshuu u socdo.
Adigoon ka tanaasulin bakhaaradeeda caanka ah ee ku yaal magaalooyinka waaweyn ee adduunka, El Corte Inglés wuxuu la qabsaday waqtiyada. Shirkaddan oo leh sannado badan oo taariikhi ah, ayaa fahantay in kanaalka internetka uu fure u yahay guuleysiga macaamiil cusub.
Waxay dib u cusbooneysiisay degelkeeda, oo ah mid saaxiibtinimo leh, casri ah oo is-dhexgal ah. Ilaa sanado qaar waxay leedahay barnaamij si macaamilku uga iibsado ama uga codsado talo xirfadle.
Nooca internetka ee Maxakamada Ingriiska Waxay sidoo kale ku dareysaa faa'iidada maalgelinta iyo kaarka u gaarka ah shirkadda maaliyadeed.
Tallaabo adag ku qaad suuqa internetka; buugiisa waa mid aad u ballaaran, badeecooyin iyo qiima ahaanba. Dharka isboortiga ayaa ah dharkiisa adag, inkasta oo ay sidoo kale bixiso dhar loogu talagalay xirashada rasmiga ah.
Isticmaaluhu wuu labbisan karaa isagoon ka tegin bogga internetka ee Jiid & Bear, Waxay bixisaa wax kasta oo ka hooseeya dharka hoose ilaa jaakadaha, qalabka iyo kabaha. Waxay la shaqeysaa cabirrada illaa XXL. Soo jeedintu waa in la booqdo qaybta dallacaadaha, taas oo fursado wanaagsan lagu bixiyo tayo iyo qiimo. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira ikhtiyaarro loogu talagalay qoyska oo dhan, maadaama aad sidoo kale ka heli karto dharka dumarka da 'walba leh iyo carruurta halkaas joogta.
Springfield wuxuu ku dhashay fikradda ah labiska ragga oo leh qaab casri ah, xarumo caalami ah oo aad u magaalo badan. Fikradani waxay ku sii socotaa shirkadda, oo bixisa dhar dabacsan oo caadi ah.
Diiwaanadooda waxay muujinayaan khadadka ballaaran ee uruurinta ee ku habboon dhammaan doorbidyada iyo munaasabadaha isticmaalka. Waxay ku guuleysatay nashqado isku dhafan oo loo isticmaali karo wakhti kasta oo maalintii ah.
Bixinta waxaa lagu kabayaa websaydh aad u fudud oo lagu socdo, iyo nidaam lacag bixin wax ku ool ah. Hawlgallada celinta iyo is-dhaafsiga waa lacag la’aan.
Zalando waa codsi online ah oo na siiya suurtagalnimada helitaanka dhammaan noocyada dharka ragga, kabaha iyo agabka ragga. Isticmaalka miirayaasha, waxaan awoodi doonnaa inaan helno dharka aan raadineyno; markaa waan sii wadaynaa howsha ama waxaan ku keydin doonnaa raadinta kuwa ugu cadcad.
Zalando waxaan ka helnaa buugga oo aad u ballaaran oo ah dharka, kabaha iyo qalabka ugu fiican; xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya tayada iyo qiimaha.
In ka badan khadadka alaabada 50.000 ayaa lagu xayeysiiyay ASOS, kaliya maahan dharka, laakiin sidoo kale dhammaan noocyada qalabka, kabaha, qalabka, dahabka iyo quruxda.
ASOS waxay leedahay adeegyo dalal badan: UK, USA, France, Germany, Spain, Italy iyo Australia iyo waliba maraakiib in ka badan 190 dal. Bakhaarka dhexe ee laga qaybiyo wuxuu ku yaal Boqortooyada Ingiriiska.
Dharka ASOS waxaa loogu talagalay qayb ka mid ah dadweynaha inta udhaxeysa 16 iyo 34 sano. Astaantu waxay xaqiijineysaa in ku dhowaad 14 milyan oo isticmaale ay booqdaan boggooda bil kasta.
ASOS waxay bilaabatay 1999, sanadkii Shabakada ladiwaangaliyay. Sanadkii 2000, summaddu waxay ku bilaabatay hawlgalkeeda khadka tooska ah magaca 'AsSeenOnScreen'; ilaa taariikhdaas kor u qaadistiisu waxay ahayd mid aan la joojin karin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Dukaamada dharka jaban ee internetka